Anwụrụ ọkụ achụpụla ndị mmadụ na gburugburu ha na Lagos - BBC News Ìgbò
Anwụrụ ọkụ achụpụla ndị mmadụ na gburugburu ha na Lagos
21 Maachị 2018
Media captionEbe a na-awụfụ ahịhịa n'Olushosun
Ọkụ na-agba n'ime ebe a na-awụfụ ahịhịa a kpọrọ Olushosun na Lagos Steetị eme la ka ndị mmadụ gba ọsọ.
Mgbe BBC Igbo gara ebe ahu ụnyaahụ, ha chọpụtara na ndị mmadụ bi gburugburu ebe ahụ nwere ike ịpụ akwapụsịala, ọkachasi ndị bi na Bello Folawiyo Cresent, bụ ebe dị na nkpọda ebe a na-awụfụ ahịhịa.
Nkenke aha onyonyo 'Aga m akwapụ ta!'. Ndị mmadụ na-agba ọsọ na be ha
Ndị BBC Igbo gbara ajụjụọnu ebe ahu kwuru na ha amaghị ihe ha ga-eme maka na anwụrụ na-ekupụta site n'Olushosun bụ ezigbo nsogbu nye ha.
Ndị mmadu tiri mkpu ka gọọmentị gbatara ha ọsọ enyemaka.
Nkenke aha onyonyo Sọ ndị nọzị na ụfọdụ ụlọ bu ndị nchekwa
Ihe ọzọ mere ihe jiri dikarịa njo bụ na ụlọakwụkwọ na ụlọụka gbara Folawiyo Cresent okirikiri. Na mbata ya, ị ga-ahụ Ikosi High School, Ikosi Primary School, ụlọụka Anglican, ụlọakwụkwọ ndị nkịtị, ahịa Jakande nakwa ebe dị icheiche ọtụtụ ndị mmadụ na-agbakọ.
Onyeisi ndị nkụzị n'Ikosi High School ekweghi ka anyi gba ya ajụjụọnụ maọbu sete foto n'ụlọakwụkwọ ya maka na ha sị na ha achoghị nsogbu gọọmentị.
Mana onyeisi ndi nkuzi ụlọakwụkwọ na-abụghị gọọmentị nwe gwara anyị na nke a bụ mbụ ha na-ahụ ụdịrị ihe a. Ha kwukwara na ha kara ịgbachi ulọakwụkwọ ha, mana ụmụakwụkwọ na-eme ụle. Ha kwuru na ha na-agbachị ụlọakwụkwọ n'oge, ma na enye ụmụaka ha ihe eji emechi imi.
Ọfọdụ ndị mmadu BBC Igbo hụru n'ụzọ yikwa ihe eji agbachi imi.
Nkenke aha onyonyo Ọkụ Olushosun agbaala izuuka abụọ
BBC Igbo gakwara gba onyeisi ngalaba gọọmentị na-ahu maka gbụrụgbụrụ na Lagos Steeti bụ Babatunde Durosinmi Etti ajụjuọnụ maka ihe a na-eme, o kwuru na ha na-agba mbọ ịhụ na a gbanyụrụ ọkụ a.
Ọ gakwara n'ihu sị na ha na-akwado ka ndị mmadụ kwapụ na gburụgbụrụ ebe ihe a mere.
Cheta na ndị ọrụ na ahu maka gbụrụgbụrụ na Lagos Steetị wakporo onye ntaakụko BBC ebe ọ nọ na-achu nta akụkọ. Maazi Etti riọrọ ndị BBC ezigbote arịrịo maka nke, sikwa na ha ga eme nyocha maka ihe mere, makana ọgbughi etu ndi ọrụ ha siri eme.
Ọtụtụ mmadụ agbaala ọsọndụ na Kogi
Akụkọ kachasi taa: Ihe na-ewe ụmunwaanyị na Toni Kan iwe
NotTooYoungToRun emeela ngaghari iwe n'Abuja
Ndị ọrụ gọọmentị Lagos Steeti awakpola onye ntaakụkọ BBC
Lagos: Katakata na-ada n'Ọjọta dị na Lagos
Ụgwọ ala Lagos: Ndị mmadụ egosila iwe ha